Mid kamid ah Rag lagu eedeeyay kufsigii iyo dilkii Xamdi oo la qabtay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Mid kamid ah Rag lagu eedeeyay kufsigii iyo dilkii Xamdi oo la...
Mid kamid ah Rag lagu eedeeyay kufsigii iyo dilkii Xamdi oo la qabtay
Ciidanka Booliiska Dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa la sheegay in xalay xilli dambe howlgal ay ka fuliyeen magaalada Cadaado ku soo qabteen mid kamid ah rag lagu eedeeyay kufsigii iyo dilkii Muqdisho loogu geystay Xamdi Maxamed Faarax.
Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliya Sakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in Ninkaasi oo lagu Magacaabo Maxamed Ibrahim Cismaan oo 24 jir ah, kunadhashay Muqdisho laguna tuhmaayo inuu ku lug lahaa kiiska marxuumad Xamdi Maxamed Faarax kana baxsaday magaalada Xamar falka ka dib.
Waxaa ay u mahad celisay Ciidamada iyo Shacabka Maamulka Galmudug oo ay sheegtay inay siwadajir ah uga Shaqeeyeen sidii gacanta loogu so dhigi lahaa eedeeysane Maxamed Ibrahim Cismaan oo baxsad ahaa.
Booliska Soomaaliya ayaa shalay sheegay in 11 Ruux ay u hayaan kiiska kufsiga iyo dilka ee dhibbane Xamdi, isla markaana baritaano ay ku hayaan dadkaasi.
Previous articleDhageyso:-Xildhibaano ku dhawaaqay Go’aan la xiriira Shirka ka socda Madaxtooyada
Next articleGalmudug oo soo bandhigtay Nin ku eedeysan kiiska Xamdi oo Ciidamadu qabteen